अहिलेसम्मको एनआरएन को मुभमेन्ट मा मैले जे देखें :राज श्रेष्ठ - Enepalese.com
अहिलेसम्मको एनआरएन को मुभमेन्ट मा मैले जे देखें :राज श्रेष्ठ
इनेप्लिज २०७६ जेठ १ गते ०:५४ मा प्रकाशित
मे १४ ,२०१९ ,अहिलेसम्मको NRN को Movement मा मैले जे देखें त्यसको नकारात्मक टिप्पणी गरिरहनुभन्दा कस्ता सामान्य काम गर्दाखेरि NRN Movement लाई सकारात्मक मार्गमा ल्याउन सकिन्छ, NRN सँस्थालाई सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ र सदस्यहरुको NRN अमेरिकाप्रतिको वितृष्णा हटाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा मेरा केही विचारहरु व्यक्त गर्ने कोशिस गरेको छु ।
NRN अमेरिकाले के गर्दा राम्रो हुन्थ्यो त ?
१) गतिशील NRN:- कुनैपनि सँस्था एउटै नारा र एउटै मात्र कार्यक्रम बोकेर दशकौंसम्म चलिरहन सक्दैन । एउटा पूरा भएपछि सँस्थाको सदस्यहरुको हितसंग सम्बन्धित थप कार्यक्रम सृजना गरिरहनुपर्छ जसले सँस्थाप्रति सदस्यहरुको लगाव तथा आफ्नोपन निरन्तर कायम रहोस् । अमेरिकामा NRN को Movement ले नागरिकताको निरन्तरता अभियान तथा हामीलाई मातृभूमिसंग जोड्ने अभियानमा सफलता प्राप्त गरेको मान्नुपर्छ । दोहोरो कर प्रणाली हटाउने एजेण्डा अब निश्चय नै द्रुतगतिमा अघि बढ्नेछ ।
यी एजेण्डाहरु अगाडि बढिरहँदा अमेरिकाभित्रै सदस्य-केन्द्रित उल्लेखनीय कुनै कार्यक्रम आएको देखिएन । सदस्यहरुलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने खालको कुनै कार्यक्रमको सृजना भएन । अमेरिकामा दैनिक गुजारा मात्र गरेर बसिरहेका हजारौं NRN हरुलाई लक्षित गरेर कार्यक्रमहरु तयार गरिनु, उनीहरुको आर्थिक सशक्तीकरण गर्न शीपयुक्त तालीमहरुको व्यवस्था गरि न्यूनतम ज्यालादरभन्दा पाँचौं गुणा बढी ज्याला आर्जन गर्ने अवस्थामा पुर्याउनु जरुरी भैसकेको छ ।
२) सदस्य-मैत्री NRN:-जसको लागि स्थापित सँस्था हो उसैलो सो सँस्था नरुचाएपछि सँस्थाको के अवस्था होला । मुख्य मुख्य काम भैरहँदा पनि सदस्यहरु सँस्थासंग जोडिने कार्यक्रमहरु पनि भैरहनुपर्छ । अन्यथा सदस्य सँख्या सत्र हजारबाट आठ हजार कम भई नौ हजारमा झरेजस्तै नौ हजारबाट आठ हजार कम भई एक हजारमा पुग्न धेरै वर्ष पर्खन नपर्ला । माथि उल्लेख गरिएजस्तै तथा अन्य कार्यक्रमहरुमा साधारण तथा आजिवन सदस्यहरुलाई नै संयोजक बनाई, उनीहरुबाटै समिती बनाई, उनीहरुबाटै कार्यक्रम सम्पन्न गराउने परम्पराको थालनी गरे सदस्यहरुको सहभागिता अवश्य बढ्नेछ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, NRN अमेरिकाले कार्यक्रम/योजना तर्जुमा गर्दा Top Down Approach का साथसाथै Bottom Up Approach पनि अबलम्बन गर्नु जरुरी छ । जसमा NRN NCC ले च्याप्टरहरु र सदस्यहरुलाई समावेश गरि स्ट्राटेजिक प्लानिंग गर्न सक्छ । जसले गर्दा NRN को परियोजनाहरुप्रति सदस्यहरुको अपनत्वको भावना जागोस् । त्यस्तै, NRN Day भनेर कोठाभित्र खादा माला लगाई भाषण मात्र गरी हजारौं डलर खर्च गर्नुभन्दा NRN Family Day किन नमनाउने? जसमा सबै सदस्यहरुलाई समावेश गरि उनीहरुसंग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु गर्न सकिन्छ ।
३)पारदर्शी NRN:- जसरी अहिले महासचिवले हरेक बैठकपछि माइन्यूट पठाईरहनुभएकोछ त्यसरी नै हरेक महिना वा तीन तीन महिनामा सदस्यहरुलाई Financial update गरिराखे कसो होला? त्यस्तै, NRN ले के के कार्यक्रम कहाँ कहाँ कस कसले कहिले गर्दैछ, कार्यसमितीका पदाधिकारीहरु एवम् डाइरेक्टरहरुको Portfolio Assignment एवम् Area Assignment के हो सो सम्बन्धि जानकारी सदस्यहरुलाई प्रदान गरिएमा NCC, च्याप्टर एवम् सदस्यहरुबीचको दूरी कम हुने र उनीहरुमा एन.आर.एन. सम्बन्धि चासो र रुचि बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।
४)संयोजित एवम् नियमवध्द NRN:- च्याप्टर र NCC को बीचमा कोअर्डिनेशनको जरुरत पर्छ । ग्रासरुट लेभलसम्म सँस्था पुग्ने भनेको च्याप्टर मार्फत नै हो, केन्द्र आफैले गर्ने होईन । सदस्यता अभिवृध्दि एवम् सदस्यताको भेरिफिकेशन जस्ता महत्पूर्ण कार्य च्याप्टरले गर्नुपर्छ । सदस्यता अभिवृध्दिमा हुने सदस्यता भेरिफिकेशनमा बदमासी भए च्याप्टरका सम्बन्धित पदाधिकारी जिन्मेवार हुने गरी मजबूत संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । सदस्यता शुल्कबाट च्याप्टरले पाउने अँश च्याप्टरले नै राखी बाँकी रकम केन्द्रमा पठाउने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । हरेक च्याप्टरले वार्षिक साधारण सभा गर्ने र साधारण सभामा गरिने कार्य त्यसबखत गर्नुपर्दछ । यस्ता अन्य केही कार्य र कार्यविधिहरु छन् जुन नियमवध्द र संयोजित हुन जरुरी छ ।
५)अनुसन्धान, विकास एवम् तालीम:- सँस्थाको सुदृढीकरण तथा समय परिस्थिती अनुसार सदस्यहरुको हित सम्बन्धि कार्यक्रम सम्बन्धमा सर्वेक्षण गर्ने, सोको आधारमा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्ने, पदाधिकारीहरुलाई आवश्यक तालीमको व्यवस्था गर्ने जस्ता कार्यले सँस्थाको दीर्घायु तथा मजबुतीमा ठूलो योगदान गर्न सक्छ । च्याप्टरका पदाधिकारीहरुलाई च्याप्टर म्यानेजमेण्ट तालीम र केन्द्रीय पदाधिकारीहरुलाई नेतृत्व विकास सम्बन्धि तालीमको अत्यन्त जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्र्य सामाजिक सँस्थाहरु Jaycees, Rotary Club र Lions Clubs International ले जस्तै NRN NCC USA ले आउँदा वर्षहरुमा NRN School को अवधारणा तयार गरि संचालन गर्नु जरुरी छ ।
धेरै कुराहरु यस लेखमा सँलग्न गर्न सकिएको छैन । अवसर प्राप्त भएमा “सकारात्मक परिवर्तनका लागि सहकार्य” गरि सबै सकारात्मक अभियान सम्भव गराउन सकिन्छ ।